Beeraha digaaga | February 2020
Faahfaahinta qiyaasta ukunta ee ukunta "Rooshada IPH-10"
Maxay yihiin sababaha dhimashada broilers?
Badanaa digaagga broiler waxaa lagu kobciyaa beeraha digaaga. Qaaduhu waxay helayaan ukun hatch ah oo loogu talagalay taranka taranka. Mararka qaarkood milkiilayaasha waxay iibsadaan digaagga naftooda, laakiin maalinta xigta waxay helayaan hal ama in ka badan. Maxay tahay sababta cawaaqibta noocaas ah, waxaan isku dayi doonaa inaan fahamno maqaalkani?
Cudurrada digaaga iyo hababka daaweynta iyo ka hortagga
Maalmahan, digaagga digaaga waa ganacsi faa'iido leh. Laakiin, sida xayawaanka oo dhan, digaagga ayaa sidoo kale u nugul cudurada kala duwan. Dhibaatada ugu weyn ee ugu weyn ee horumarinta beeraha digaaga ayaa ah cudurada digaaga. Mararka qaarkood waxay dhacaan in ay jiraan cuduro faafa oo aad u daran, taas oo ay sabab u tahay inaad jarayso dhammaan xoolaha.
Zagorysky Salmon Chicken
Awowayaasheenu waxay ahaayeen dad aad u fiican marka ay barbar dhigaan digaagga! Laga bilaabo laga bilaabo tuulada caadiga ah ee tuulooyinka, dhammaan gobollada beeraha, waxay kuu caddeynayaan in tani tahay ganacsi aad u faa'iido leh. Digaagga ma aha oo kaliya maaddooyinka cusub oo aan ahayn GMO miiska, laakiin sidoo kale ukunta. Haddii aad rabto in aad bilowdo digaagga digaagga, oo aadan ogeyn waxa jeex ah ee dooran, ka dibna digaagga Zagorsky salmon waa wax aad u baahan tahay.
Dildilaha digaagga Kuchinsky guuradii
Qaar badan ayaa ku hawlan digaagga taranta, sababtoo ah tani ma aha ganacsi khibrad leh, laakiin natiijada ayaa waxtar u leh yaraynta kharashyada miisaaniyadda gaarka ah. Isla mar ahaantaana, beeralayda daaqa ee casriga ah ayaa durbadiiba barteen cashar ah in waxtarka ganacsigaani uu ku xirnaan doono xooggaaga quudinta iyo daryeelka shimbiraha, laakiin sidoo kale xulashada saxda ah ee taranka.
Inkasta oo maanta ay fududahay in la helo daraasad daraasad ah iyo noocyo digaag ah, kuwaas oo lagu kala saaro wax soo saarka wanaagsan, hase yeeshee cayayaanka si fiican loo yaqaan lama lumiyo xiriirkooda. Gaar ahaan, mid ka mid ah waa digaagaha Leggorn, kuwaas oo sannado badan loo yaqaan caalamka oo dhan sifooyinka wanaagsan.
Maanta, digaagga lo'da ayaa ah hawl aad u caan ah. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad cuno marwalba cusub, dabiici ah, hilib iyo ukun nadiif ah. Laakiin, haddii aan ka hadleyno digaagga digaaga Brahma, ka dibna waxay sidoo kale keenaysaa qanacsanaanta sheeko. Dabcan, tani tan of digaagga noqon doonaa decoration of yard kasta oo shimbir ah. Waxay had iyo jeer u kala soocaan midabada jilicsan, degenaansho, isku dheelitirnaansho, sharafnimo, dulqaad.
Khamriga dabaasha: sida loo doorto oo loo ilaaliyo shimbiraha
Marka xilliga gu'ga yimaado, qorraxdu si tartiib ah ayuu u soo dhaweeyaa wadada, dadka degaanka xagaaga oo sugayay bilowgii xilli-ciyaareedka cusub oo dhan jiilaalka oo tagaan guryahooda si u dhow dabiicada. Tani waxay tagaysaa dacha waxaa badanaa dib loo dhigaa dhowr toddobaad, mararka qaarkood dhowr bilood, dad badan oo nasiib u leh inay leeyihiin guri sida, bilaab digaag.
Noocyada ukunta iyo ukunta ee digaagga: faa'iidooyinka, faa'iido darada, sifooyinka
Beeraley kasta, oo leh hoygiisa, wuxuu ku dari karaa xayawaannada dabiiciga ah dhowr digaag daaqsinka gudaha ah. Waxaa jira noocyo badan oo shimbiraha ah iyo tilmaamo kala duwan. Waqtigan xaadirka ah ee horumarinta warshadaha digaaga waxaa jira in ka badan boqol jinsi digaagga. Iyadoo ku xiran jihada beerta, waxay u qaybsan yihiin noocyada.
Barashada si aad u sameyso shambe adigoo quail
Nafaqaynta iyo koritaanka digaagga ee guriga waa ganacsi faa'iido leh. Ka dib dhammaantood, shimbiraha yar yar waxay cunaan cunto aad u yar, laakiin isla markiiba waxay ukumo si fiican u bixiyaan waxayna bixiyaan xitaa qadar yar oo hilib ah, laakiin waxay leedahay qiimo weyn. Haysashada digaagdarrada gabi ahaanba dhib ma leh, maadaama ay xitaa ku noolaan karaan guri, haddii aad dhisto qafis gaar ah.
Digaagga kohinhin ee jilicsan
Haddii dukaan beeralay ah oo bilaabaya inuu doorto digaagga, waa inuu fiiro gaar ah u leeyahay kohinhin, kuwaas oo kaliya ma ahan ukumo, laakiin sidoo kale wuxuu dhisi karaa si wanaagsan ee murqaha. Cochinquins waa nooc qurux badan. Maanta, waxaa si aad ah loo arki karaa beeraha digaaga ama guriga.
Shimbiraha sida hindhisyada ayaa aad u caan ah maanta, ma aha oo kaliya beeraha digaaga, laakiin sidoo kale qoysaska. Hilibka shimbirahan ayaa leh sifooyin cunto, tayo sare leh. Xayawaankani waa kuwo aad u nadiif ah, oo aan daryeel lahayn. Caanaha ugu caansan ee shimbirkani waa turjumaan cad oo caan ah.
Kalluunka digaagga Orpington
Markaad iibsato shimbiraha cusub, gaar ahaan, digaagga beerahooda, khabiirada xoolaha ee hiwaayadda ayaa xiiseynaya maaha kaliya wax soo saarka ukunta oo ah hal nooc ama mid kale, laakiin sidoo kale hilibka. Xaaladda beeraha loogu talagalay ee digaagga ee lagu gowraco, waxaa fiican in la doorto cayayaanka kuwaas oo ujeeddadan u ahaa ujeedadaas in la nadiifiyey. Mid ka mid ah noocyadaas waa nooc ka mid ah Orpington.
Waxyaabaha muhiimka ah ee quudinta ku habboon
Dhammaan beeralayda digaaga ee go'aaminaya inay ka soo baxaan boodhadhku waa inay ogaadaan in waxa ugu muhiimsan ee tarankooda ay tahay nafaqo haboon ee shimbiraha. Haddii aad wax kasta oo saxda ah sameyso waxaad ku guuleysan doontaa guul weyn. Guud ahaan xadgudubka caafimaadka shimbirku waa nafaqo daro Waxaa jira khilaaf badan oo u dhaxeeya beeraleyda digaaga ee ku saabsan quudinta quudinta.
Cadaadiska guriga hargaha, waa maxay? Waa maxay noocyada hawo-qaadashada ee jira?
Qof kastaa wuxuu u maleynayaa in dhisey dhismaha laftiisa oo dhan, laakiin maaha sidaas, weli waa lagama maarmaan in si habboon loo qalabeeyo qalabka lagama maarmaanka ah. Waxaa laga yaabaa in aad u maleyneyso in wax dhibaato ah aysan jirin, laakiin in la dhiso dabaqyo, hudheello, si ay u sameeyaan iftiin iyo hawo. Haddii aad sameyso wax kasta oo khaldan ama wax ka maqan, markaa shimbirahaagu waxay joojin karaan daadinta, taas oo aan fiicneyn.
Cabitaanka iyo qudaarta digaaga ah ee aad sameysey
On khaanadaha dukaamada oo dhan ee waqtiyada kala duwan ee sanadka waxaad ka iibsan kartaa alaabta cusub. Wax dhibaato ah ma jiri doonto iibinta hilibka digaaga. Hase yeeshee, beeralayda ayaa waxay soo saaraan dhir kala duwan iyo xayawaan guri oo ku yaal suuqyadooda. Dhammaantood waxay kuu sheegi doonaan in alaabta guriga-koray ay yihiin kuwo aad u fiican oo faa'iido badan ka dukaanka.
Beereyta ayaa Linda ku tarma
Maanta, badi hilibka dukaamada ku jira ayaa dadka siinaya fursad aan ku fekerin inay ku beeri karaan doofaarkooda, digaagga, ducklings iyo berriga. In tuulooyinka iyo ma aha oo kaliya beeraha iyo farsamayaasha xoolaha weli hayn beerta, ma aha oo kaliya helitaanka ukunta ama caano, laakiin sidoo kale hilibka. Ka dib, waxa fiican in la hubiyo in xayawaanka aan la siinin antibiotics miisaanka korodhka, laakiin kaliya firileyda, cawska iyo khudaarta cusub.
Turkeys oo ah jilbada isbaanishka ee Palevaya
Turkiga had iyo jeer waa mid aad u caan ah dadkana jecel ma aha oo kaliya dhadhanka laakiin tayada cuntada ee hilibka. Ka dib oo dhan, turki digaaga ah oo leh digaag ayaa lagula talinayaa dadka doonaya inay ku dhajiyaan cunto caafimaad leh ama miisaan lumaan. Mid ka mid ah sababaha naas-nuujinta firfircoon ee turkiga iyo turkiga ee qoysaska waa in aysan keenin dhibaato badan.
Turkiga ayaa muddo dheer lagu xannaaneeyay qoysaska sida digaaga. Xayawaankani waxaa lagu qiimeeyaa miisaankooda aadka u fiican, sida turki wanaagsan oo culeyskiisu yahay miisaankiisu waa 20 kg. Intaa waxaa dheer, hilibka turkiiga ah ayaa aad u qiimeeya macaamilka iyada oo ay ugu wacan tahay suuqgeeda cuntada iyo dhadhanka. On beeraha waaweyn waxaa jira turkiga badan sida ay leeyihiin digaagga, sababtoo ah kicinta shimbirahan waa mid aad u kharash badan.
Digaagga cad ee Ruushka
Muddo dheer tan hen waa lammaanaha nin ee nolosha. Caleenta digaagga, caanaha Ruushka, waa mid ka mid ah cagaarka ugu caansan uguna badan dalalka CIS. Sababtoo ah warkeeda, waxaad kula kulmi kartaa beeraha digaaga iyo qoysaska, iyo alaabta ay ka mid yihiin dukaamada. Xannaaneeyayaasha muddo 20 sano ah ayaa shaqo ku abuuray abuurista dalkan.
Digaagga jilicsan "Minorca"
Ilaa hadda, waxaa jira tiro aad u badan oo ah digaagga meelo kala duwan. Qaar ka mid ah waa kuwo caan ah, qaar weli wali ma helin faafin ballaaran. Digaagga Minorca ayaa iska leh noocyada yar-yar ee la yaqaan, inkastoo dad tiro yar ay ka og yihiin oo keliya marka laga hadlayo CIS, nooca digaagana waa mid si fiican looga yaqaan Europe.
Caato ah, dabool caafimaad leh iyo naas-nuujin - ma suurtogal tahay in la isku daro mana waxyeelo ilmaha?
Ubax ka soo buugga gaduudan
Ducklings waxay ku dhacaan cagahooda waxayna u dhintaan: sababaha iyo daaweynta
Waa maxay Kornevin fiican, haddii aad u baahan tahay inaad koraan xididdada orchid? Maxaa kale oo waxtar leh micnaheedu?
Ma rabtaa inaad la yaabto oo soo jiidato dareenka deriska ee waddanka leh yaanyo aan caadi ahayn? Waxaa jira darajo aad u wanaagsan. Wuxuu leeyahay dhowr magacyo. Dadka caanka ah - Guurka iyo Haweenka Haweenka, iyo sidoo kale magaca rasmiga ee kala duwan waa Auria. Marka lagu daro muuqaalka asalka ah, waxay kugu farxi doontaa dhadhanka iyo dhalidda wanaagsan. Read More
Tilmaanta iyo sifooyinka mawduuca ee bakaylaha dhuxusha